Iindaba -Ingasetyenziselwa phi ilaphu le-silica ephezulu
Ilaphu le-silica ephezulu luhlobo lobushushu obuphezulu obunganyangekiyo kwimathiriyeli yefiber. Ngenxa yeempawu zayo ezinzileyo zeekhemikhali, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuchasana nokupheliswa, iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwi-aerospace, isinyithi, ishishini lamachiza, izinto zokwakha, ukhuseleko lomlilo kunye namanye amasimi emizi mveliso. Ayinakutsha, iqondo lobushushu eliphezulu ukumelana (500 ~ 1700 ℃), isakhiwo compact, akukho kwinwebu, ukuthamba ukuthamba kunye nonyamezelo.
Kukulungele ukusonga izinto ezingalinganiyo kunye nezixhobo. Ingubo ephezulu yesilica inokugcina into kude nendawo eshushu kunye nendawo yentlantsi, kwaye kuthintele ngokupheleleyo ukutshisa okanye ukwahlula ukutshisa. Kufanelekile ukuwelda kunye nezinye izihlandlo ngeentlantsi kwaye kulula ukwenza umlilo. Iyakwazi ukumelana ne-spark spatter, i-slag, i-welding spatter, njl
Ingasetyenziselwa ukwahlula indawo yokusebenza, yahlulahlula umaleko osebenzayo, kunye nokuphelisa ingozi yomlilo enokubangelwa kukusebenza kwe-welding; Ingasetyenziselwa ukugquma ukukhanya ukuseka indawo yokusebenza ekhuselekileyo, ecocekileyo kunye esemgangathweni kunye. Ingubo ephezulu yesilica inokwenziwa ngengubo yomlilo, esona sixhobo silungileyo sokukhusela iiyunithi eziphambili zokhuselo lomlilo.
Isetyenziswa kwiindawo ezinkulu zokuthenga ezinkulu, kwiivenkile ezinkulu, kwiihotele nakwezinye iindawo zolonwabo zoluntu kulwakhiwo lomsebenzi oshushu (njengokuwelda, ukusika, njl.njl.). Ukusetyenziswa kwengubo yomlilo kunokunciphisa ngokuthe ngqo ukuqaqamba kwentlantsi, ukwahlula kunye nokuthintela izinto ezinobungozi kunye neziqhushumbisi, kunye nokuqinisekisa ukuthembeka kobomi babantu kunye nomzi mveliso.
Ndiyakholelwa ukuba uyakuba nokuqonda okutsha kunye nokuqonda kwendwangu ephezulu yesilika emva kokufunda. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga noku, ungahlawula ngakumbi iwebhusayithi yethu, ngethemba lokukunceda.